HALKAAN KA AQRISO WARGEYSKA MAANTA EE MOGTIMES DAILY OO AH KHAMIIS 14KA 0CTOBER 2021
Thursday October 14, 2021 - 08:43:46 in Wararka by Mogadishu Times
FARMAAJO oo markii ugu horreysay amaan ay Xasan, fariinna u diray mucaaradka
Madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday Ma xamed C/hi Farmaajo ayaa siyaasiyiinta mucaa radka ah u soo jeediyey inay meel iska dhigaan danaha shakhsiga ah oo ay muujiyaan walaaln imo, wadajirna ay u soo dhaweeyaan guusha ay Soomaaliya ka soo hoysay kiiska badda ee xuk unkiisa kama dambeysta ah ay riday maxkama dda ICJ.
Farmaajo oo aad u soo dhaw eeyey xukunkii maxkamadda, isla markaana sheegay in D/Somliya ay aqbashay, una hoggaansamey so xukunkaas ayaa sheegay in guushaan aysan sheegan karin cid gaar ah.
Md. Farmaajo ayaa markii ugu horeysay fagaare ka qiray wanaag uu sameeyey madaxweynihii is aga ka horeeyey Xasan Sheekh Maxamuud.
"Waxaa xusid mudan, doorkii sharafka lahaa ee walaalkey madaxweynihii hore ee dalka Xas an Sheekh Maxamuud oo bilaabay geedi socodkii cadaaladeed ee lagu difaacayey badda Soomaal iyeed oo ay sheegatay Kenya,” ayuu yiri Madaxw eyne Farmaajo.
Madaxweynaha ayaa sheegay in Mucaarad iyo Muxaafid aysan kala laheyn guushaan Soomala iya uga soo hoyatay kiiska badda ay muranka gel isay Kenya, isagoo ku tilmaamay guushaan ay dhaxli doonaan jiilka dambe ee Soomaaliyeed.
"Guushani ma aha mid u soo hoyatay cid gaar ah, mana kala lahan muxaafid iyo mucaarid, ma na aha libin ay leeyihiin shakhsiyaad kooban bal se waa guul ka dhaxaysa dhammaan ummadda Soomaaliyeed, waana guul ay dhaxli doonaan jiilasha soo socda,” ayuu yiri Farmaajo.
Sidoo kale intii uu jeedinayey khudbadaas waxa uu sheegay in isagoo ka faa’iideysanaya fur sadaas uu siyaasiyiinta kale ee ka soo hor jeeda uu ka codsanayo inaay muujiyaan midnimo iyo farxad xukunkaan maxkamadda awgiis.
"Waxaan rabaa inaan fursaddan uga faa’ida ysto inaan ku dhiirrigeliyo siyaasiyiinta walaalah ay ah inay muujiyaan midnimo, isku duubni iyo in si wadajir ah looga shaqeeyo ilaalinta danaha qar ankeena, annaga oo meel iska dhigayna danaha shakhsiga ah &aragtiyada kala duwan ee aan ka leennahay siyaasadda dalka,” ayuu yiri madaxw eyne Farmaajo.
Mahdi Guuleed oo Sharxay fasiraad qaldan oo laga bixiyey xukunkii ICJ
Soomaaliya ayaa Dorraad ku guuleysatay inta badan kiiskii dacwadda badda ee kala dhaxeeyey Kenya, ayada oo loo xukumay dhul-badeedkii la Isku hayey badankiisa, sida aygo’aamisay Max kamadda Caalamiga ah ee Cadaala dda (ICJ). R/Wasaare Ku-xigeenka So omaaliya, Mahdi Maxamed Guuleed oo hoggaaminayey wafdiga Soomaali ya ee ku sugan Magaalada Hague ee dalka Ne therlands oo la hadlay idaacada VOA-da ayaa guushaas ku tilmaamay mid 100% ah.
"Waxaa qabaa inuu ahaa xukun xaq ah, dood ihii Soomaaliyana dhamaanteed ay maxkamadda xukuntay, geedi socod ayuu soo maray oo socd ay muddo 7 sano ah mudadaas Somali waa soo halgantay oo waxaa galay dadaal badan oo naf & maal leh,” ayuu yiri Mahdi Guule ed."Maxkamad da cadaalada Adduunka oo dunida dhan aqoons an-tahay, waxay qirtay xuduuda badeed ee leeda hay Soomaaliya iyo Kenya ay cadahay, waana aqlabiyada wixii lagu murmay oo badankeeda loo xukumay Soomaaliya.”
Sidoo kale waxa uu sheegay in maxkamdda ay la timid falaasafo cusub oo sharci ah oo ka baxsan doodii Soomaaliya ee xariiqa, hase yee she ay aqbaliyada intii ugu badnaa ee lagu mura nsanaa ay ku guuleysatay Soomaaliya. "Waxaa la inkiri karin in aragti cusub oo sunihii maxkama da ka duwan oo ku cusub ay keentay, anaga sidii awal hore aan qabnay oo haddana qabno xukun kaasi cadaalad ayuu ku dhacay, waxaana 100% ku guuleysatay Soomaaliya.”
Mahdi Guuleed ayaa waxba kama jiraan ku ti lmaamay in loo kala qeybiyay 2 dal intii lagu mu ransanaa, isagoona ku dooday in erey bixinta xuk unkaas si kale loo fasirtay oo waxyar oo macno la heyn loo leexiyay Kenya.
R/wasaaraha Somaliya oo kulan la qaatay madaxdii dowladda uga qeyb gash ay dhagey sigii go'aanka Maxkamada ICJ
Raysal wasaaraha XFS Md.Maxamed Xuseen Rooble ayaa kulan kula yeeshay Aaladda Fogaan Araga, wafdigii Dowladda Soomaaliya uga qeyb galay dhageysiga go'aan ka gaaristii kiiska dac wada Badda ee Maxkamada Aduunka ICJ.
Rw/raha ayaa horey ugu bogaadiyay wafdigii Dowlada Soomaaliya howsha qaranka u qabteen, islamarkaana waxuu u mahadceliyay qareenadii difaacay badda, iyo waliba madaxdii hore ee dal ka iyo shacabka Soomaaliyeed.
"R/W/rah kulan la qaatay wefdigii D/ Soomaali ya uga qeyb galay dhageysiga go’aanka maxkam adda ICJ ee baddeenna, ayaa ku bogaadiyay sha qadii ay qaranka u qabteen, isagoo sidoo kale u mahad celiyay qareennadii difaacayay badda, ma daxdii dalka soo maray iyo shacabka Soomaaliye ed" ayuu yiri Afhayeenka XFS Md.Maxamed Ibra ahin Macalimuu. R/wasaare ku-xigeenka XFS Ma hdi Maxamed Guuleed oo hoggaaminayay waf diga dowladda uga qeyb galay dhageysiga go’a anka Maxkamadda ICJ ee kiiskii badda ayaa she egay in guddoonka Maxkamadda bilow ilaa iyo dhamaad uu sheegayay inay kiis ka ku guuleysatay dowladda So maliya.
Dorraad galinkii dambe ayay aheyd markii Ma xkamadda Caalmiga ah ee ICJ go’aan ka gaartay kiiskii dacwadda badda ee u dhaxeeyay Sooma aliya iyo Kenya, iyada oo diiday doodda ugu w eyn ee Kenya ee aheyd inuu jiro xad u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya oo la barbar ah xariiqa loolka. iyadoo kenya diiday wixii natiijo ah ee ka soo baxada maxkamadda aysan aqoonsan doonin
Guddoomiyaha G/Banaadir ahna Duqa M/ Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed (Cumar Filish) ayaa Shalay kulan kula qaatay Xarunta Aq alka Dowladda Hoose ee Xa mar Wafdiga ka socday Wor ld Bank. Wafdiga ayaa wax aa hoggaamineysay madaxa qaybta dib u dhiska magaalooyinka Mrs Makiko Watanabe oo ay wehlinayeen hawlwadeeno sare oo ka socday Bankiga aduunka.
Kulankaan ayaa diiradda lagu saaray dhame estrika wajigii koowaad ee mashruuca dib u dhis ka jidadka gaar ahaan waddooyinka xaafadaha ee nuuca mar marka loo yaqaan Intar looga.
Waxaa sidoo kale looga wada hadlay bilaab ista wajiga labada ee mashruuca dib u dhiska oo sanadkaan xal u heli doono arrimaha bulaacada ha Caasimadda Muqdisho.
Duqa Magaalada ayaa uga mahadnaqay Ban kiga aduunka taageerada ay siiyaan magaalada Caasimadda ah waxa uuna dhankiisa u balnqaa day in ay kaalin weyn ka qaadan doonaan dadaal ada dib u dhiska Caasimadda.
Kulanka waxaa sidoo kale qayb ka ahaa Unugya da heer Qatar iyo kuwa Gobolka Banaadir ee maamulida fulinta mashruuca dib u dhiska mag aaloyinka.
C/C/SHAKUUR oo si adag uga fal-celiyey khudbaddii FARMAAJO – "Kama filaynin”
Siyaasiga caanka ee Md.C/raxmaan Ca bdishakuur Warsame ayaa ka falceliyey khudb adii uu Habeen hore jeediyey madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaad ay oo ka hadlay go ’aankii ka soo baxay maxkamadda cadaal adda adduunka ee ICJ.
Hoggaamiyaha xisbiga Wad ajir, Cabdiraxmaan Cabdishak uur Warsam ayaa shaaca ka qaaday inay lama filaan ku no qoto in madaxweyne Farmaajo uu qiro kaalintii uu isaga ku lahaa dacwadda ba dda ee ay inta badan ku guuleysatay Soom aaliya. Wuxuu dhanka kale tilmaamay inuu aad ula yaabay sida xafiiska madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday uu mugdi usii gelinayo is-afgaradkii la saxiixay sanadkii 2009-kii.
"Kama filaynin nin gurigeyga igu soo weeraray inuu qiro kaalintii aan guusha dacwadda kulahaa, laakiin waxaan la yaabay in isaga iyo CBB-da xa afiiskiisa ay weli isku deyayaan inay mugdi geliy aan Is-afgaradkii 2009-kii la saxiixay,” ayuu qoraa lkan ku yiri CC Shakuur.
Sidoo kale CC/Shakuur ayaa intaasi ku daray "Waxaan kala garan waaye in aqoon darri u gey say iyo in cadowtinnimo halkaa la gaartay. Ugu dambeyn wuxuu hoosta ka xariiqay in maxkamad da & qareenadii u doodayey Soomaaliya ay isla qireen in is-afgaradkii horey u dhex-maray Soom aaliya &Kenya uu laf-dhabar u ahaa dacwadda badda ee ay hadda guusha weyn ka gaartay dow ladda federaalka.
"Garsoorihii Maxkamadda, qareennadii ajnaba gi ahaa iyo kuwii Soomaalida ahaa waxay qireen in is-afgaradku uu lafdhabar u ahaa badbaadinta baddeenna,” ayuu sii raaciyey.
Si kastaba, dacwadda badda ee haatan la soo gaba-gabeeyey ayaa muddo dheer soo jiitameys ay, waxaana ay soo bilaabatay 2014-kii, iyada oo heerar kala duwan soo martay.
Gen. Odawaa oo Dhuusamareeb kula kulmay Saraakiisha Ciidanka Xoogga Dalka.
Taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka Gen. Odo waa Yuusuf Raage ayaa M/Dhuusama reeb xa runta DG Galmudug kula kul may Sa raakiisha C/Somaaliya ee ku sugan Magaaladaas waxaana uu kala hadl ay adkeynta ammaanka Galmudug. Gen Odowaa warbixinno ayuu ka dha geystay Sar aakiisha Ciidanka qaybta 21-aad, ku wa laga qa aday Muqdisho & hoggaannada hoose ee CXD , dhankiisa wuxuu u gudbiyay howlaha loo baahan yahay inay ku dhaqaaqaan.
Taliyaha oo 7adkii hore tagay M/Kismaayo ayaa bilaabay kormeyrka goobaha ay ku sugan yihiin C/M/Soomaaliya.
Dhanka kale illo ku dhaw Safarka Taliye Odo waa ayaa sheegay in safarkiisa Dhuusamareeb ka dib inuu tagayo M/Jowhar xarunta DG Hir-Sha beelle si uu u qiimeeyo xaaladda Ciidamada Xo ogga Dalka & goobaha ay joogaan.
CXD & Militariga AMISOM waxay mas’uuliyad ka saaran tahay xaqiijinta nabadgalyada Magaalooy inka lagu qabanayo Doorashada Golaha Shacab ka BFS, Booliiska FD/Goboleedyada AMISOM ay
xaqiijinayan ammaanka gudaha Magaalooyinkas
Odayaasha beesha Guriceel oo ka horyimid Ahlu-Sunna una hanjabay Shaakir
Odayaasha dhaqanka M/Gurceel ee G/Galga duud ayaa ka soo hor jeestay joogitaanka ururka Ahlu-Sunna ee magaaladaas, waxayna sheege en in Sheekh Shaakir uu ka diiday kulan ay ka dalbadeen, si ay u gala hadlaan xaaladda cakiran ee M/Gurceel.
Odayaashaan oo warbaahin ta la hadlay ayaa cod dheer ku sheegay inaysan aqbaleyn xaal adda ay ku sugan tahay M/Gurceel oo sida ay sheegeen hadda noqotay ‘dhufeys ciidan’ sidoo kale dadkii shacabka ahaa ayey odayaashu she egeen inay isaga carareen magaalada.
"Sh.Shaakir xiriirkiisaan raadinay, in badan ay aan isku daynay, anagoo 15 odayaashii dhaqan ka ah, ayaan Shalay iridda gurigiisa mudo hal sa ac ah taagneyn, waxaan isku dayeynay inaan la kulano oo kala hadalno xaaladda magaaladaan dadkii shacabka ahaa ay ka barakaceen, balse waa nagu dhageystay la kulankeenana waa diid ay, Sheekh Shaakir ma aqoon yaride gadaal u fii ri waxa nagu dhacaya, adigu guri qorxoon ayaad isaga jirtaa, laakiin shacabkii Gurceel guryahooda ayey isaga carareen,” ayuu yiri mid ka mid ah od ayaasha.
Oday kale ayaa yiri, "Odayaashii magaaladaan anagaa ah, mana aqbaleyno xaaladda hadda ay Gurceel ku sugan tahay, naga bixiya ciidamada an, qax kuma sii jiri karno, dagaalna uma rabnee Ahlu-Sunna ha isaga baxdo Gurceel.”
Odayaasha qabtay shirkaan jaraa’id ayaa ka soo jeeda beesha Ayaanle Cayr, oo ka mid ah juf ooyinka ugu saameynta Cayr-ka daga Gurceel, waxayna sheegeen in Sheekh Shaakir aysan ka yeeli doonin in magaaladooda uu dagaal ku dhe xgalo oo furin colaadeed uu ka dhigo.
"Toos ayaan u beegsanayaa Sheekh Shaakir, naga dul qaad Sheekh ciidankaan aad lasoo ga shay magaalada, hadaa diido meeshaan dad ay aa dega, waana kuu jawaabi doonaa, Insha Allaah,” ayuu yiri Oday kale.
SHARIIF iyo C/C/Shakuur oo Habeen hore soo bandhigay runta heshiiskii badda ee Kenya
Waxaa Habeen hore Muqdisho lagu qabtay ku lan ay isugu yimaadeen inta badan siyaasiyiinta reer Muqdisho oo ay ugu horee yaan golaha midowga mushara xiinta, waxaana kulankaas lagu soo dhaweynayey go’aankii ay maxkamadda ICJ ka qaadatay kiiska badda ay sa nadihii lasoo dhaafay isku heysteen Soomaaliya iyo Kenya, waxaana kulanka khudbado ka jeedi yey siyaasiyiin u badan xubnaha midowga musha raxiinta. Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo mudo dheer lagu eedeynayey saxiixa heshiis la xariira badda ayaa ka mid ahaa xubnaha ka ha dlay goobta, waxuuna sharaxay nooca uu ahaa heshiiska ay xukuumaddii uu ka tirsanaa ee Sh. Shariif ay Kenya la saxiixatay, kaas oo sida uu sheegay badbaado u noqday badda Soomaaliya.
Cabdiraxmaan ayaa Madaxweyne Xasan Sh. ku amaanay inuu Q/Midoobey ka diiwaan gel iyey EAZ-ka Soomaaliya, kaas oo D/ Soomaaliya lagu xujeyn jiray markii ay ka dacwooto kalluumeysi ga sharci darrada ah.
Cabdiraxmaan oo tusaale u soo qaatay qiso ku dhacday Caaisha RAC ayaa sheegay in aduunka wax been abuurka ka xun aysan jirin, "Waliba wa xaa ka sii daray markii lagu been abuurto ee aad weyso qof ku dhaha war waxaas ninkaan kama suurtoobaan ee ka leexda,” ayuu yiri CC Shakuur oo u muuqday inay kuleyl badan ku heysay in dad badan ay ka dhaadhacsaneed inuu badda gatay.Guddoomiye Cabdi Xaashi C/hi oo goobt aas ku raali geliyey Cabdiraxmaan Cabdishakuur ay aa yiri, "Wiilkeyga Cabdiraxmaan Cabdishak uur raali ha iga noqdo, sababtoo ah waxaan ku jir ay dadkii qabay inuu galay heshiis uusan shaqo ku laheyn oo badda lagu iibsaday, baarlamaankii aan xilligaas ku jiray ee 8-aadna waxaan qabaa inuu sameeyey hal arrin uu aad u fiicneed, go’ aan waxaan qaadanay aan u bixinay ‘dhaxal dho wr’ kaas oo dhigayey ilaa inta dowlad Soomaaliy eed ay ka imaaneyso in bad iyo biri aan laga wad ahadli karin dhulka Soomaaliyeed.”
Cabdi Xaashi oo sii hadlaayey ayaa yiri, "Xal ay laba dareen ayaan qabaa, kan 1aad waa dar een farxadeed oo ku aadan xukunka maxkamad da, waxay ICJ cadeysay oo noo ogolaatay waixii aan xaqa u laheyn, dareenkeyga 2aad waxa uu yahay, waxaad moodaa 1947-kii halkii aan joogn ay inaan Xalay taaganahay, goortaas oo aheyd xilli ay Soomaaliya isku heysteen dalal awood ba dan, marka waxaan is leeyahay amay Maanta u egtahay sidii berigaas oo gumeysi la idin geliyaa?
Taasna waxaa noogu wacan inaan ku guuldary sanay inaan dadkeena isku keeno oo mideyno.”
Dhankiisa madaxweynihii hore Shariif Sh.Ax med oo dalka xukumayey markii uu soo bilaawd ay muranka Shalay la soo afjaray ee badda ayaa ka hadlay goobtaas, isagoo ku adkeystay in heshi iska la sheegayo inay galeen Kenya iyo xukuuma diisii uu hoggaaminayey Cumar Cabdirashiid uus an waxaba ka ogeyn.
"Xilligii murankaan soo bilaawday xaalka ayaa nagu adkaa oo Muqdisho lix degmo kaliya ayaa gacanteena ku jirtay, waxaana D/Kenya u she egay in arrimaha badda aana kala hadli karin, ka dib waxaa dadaallo bilaabay dowladda Norway iyo UN-ka.”
"Xukuumadeydii waxaa lagu qanciyey inay la gama maarmaan tahay in anaga iyo Kenya aan badda wax iska dhahno Cumar Cabdirashiid oo xukuumadda hoggaaminaayey iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ka tirsanaa ayaa go’aanka qaat ay. Aniga la ilama soo socodsiin arrintaas, subax dii heshiiskaas la saxiixaayey waxaa isoo wacay Cabdiraxmaan oo iguyiri madaxweynow waxaa la rabaa in heshiiskaas la saxiixo ee maxay kula ta hay? Waxaan iri R/wasaaraha warkiisa yeel, wa xii Alle naga siiyaba,” ayuu yiri Sh. Shariif.
Waxuu intaas ku sii daray, "Intaas ka dib wax aan wacay R/wasaare Cumar waxaana dhahay maxaa arrintaan iiga qarisay? Waxuuna iigu jawa abay waxaan moodayey inaad ogtahay oo hal kaan ka ogahay? Wixii markaas ka dambeysay qeylo dhaan ayaa is qabsatay, waxaana magaal ada gashay in badii la gatay, waxay noqotay in Cumar iyo Cabdiraxmaan aan ka shakiyo, sedd axdeenu weligeen iskama aanaa warsan arrinta as, nin kasta ninka kale markii uu arko waa ka sii jeesa jiray, marka Ilaahaa mahad leh oo hadda naga xoreeyey kiiskaas.”
Cumar Cabdirashiid oo Beeniyey Arrin uu Habeen hore Sheekh Shariif ka sheegay Muqdisho
R/Wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Ca bdirashiid Cali Sharmaarke ayaa weerar ku qaad ay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sh. Axmed oo Habeen hore mar kale ku celiyey inuusan waxba ka ogeyn saxi ixa heshiiskii is-fahamka badda ee 20 09 lala galay Kenya ee loogu magacd aray Memorandum of Undertanding (MoU). Heshi iskaas ayaa waxaa saxiixay Cabdiraxmaan Ca bdishakuur oo xilligaas ahaa wasiirka qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah, waxaana dalka mad axweyne ka ahaa Shariif, halka uu Cu mar Cabdir ashiid ahaa Ra’iisul wasaare.
Sheekh Shariif oo Habeen hore ka hadlay Munaasabad ka dhacday Muqdisho, oo loogu da baal-degayey go’aanka ay Maxkamadda ICJ ka gaa rtay kiiska badda ayaa sheegay inaanu
Ammar adag oo lagu soo rogay Milkiilay aasha Hoteelada Gaalkacyo.
Duqa M/Gaalkacyo ee Galmudug Cabdiraxmaan Sheekh Xasan ayaa waxaa uu soo saaray awaamiir lagu sugayo Amniga G/Gacyo. Guddoomiyaha ayaa wareegtadi isa wuxuu ku faray milkiilaaya sha ama maamulayaasha Hote elada Gaalkacyo inaysan marti gelin shirar ama sim inaaro aan loo he ysanin warqad ogolaansho maa mul ah, isla markaana ciddii hotelkeeda ku qabata arrimaaas oo aan fasax Maamul loo heysan ay la kulmi doonaan sharci adag.
Dhanka kale waxaa ammarkan la faray qof kasta ama urur kasta ee qabanayo shir ama siminaar inay warqad ogolaansho ah ka soo qaatan maamulka Degmada, si loo hubiyo waxa ay qabanayaan, taasi oo lagu sheegay inay qeyb ka tahay qorshaha uu maamulka ku xoojinayo
amniga M/ Gaalkacyo.
Wasiirka ganacsiga oo khudbad ka jeediyay shirka waddamada dhex-dhexaadka ah.
Wasiirka Wasaaradda Ganacsiga iyo Warshad aha Xukuumadda Fedaraalka Soomaaliya Mudane Khaliif Cabdi Cumar iyo wefti uu hoggaaminaayey oo uu ka mid ahaa Madaxa Safaaradda Soomaaliya ee Serbia Ambassador Maxamed Cabdullaahi Axm ed, ayaa caasimada dalkaasi Beldgrade kaga
qeyb-galay shirka iyo xuska sanad guurada 60-aad ee ka soo wareegatay aas-aaska dhaq-dhaqaaqa dawladaha dhex-dhexaadka ka ah isbahaysiyada kale ee ka jira caalamka.Dhaq-dha qaaqan oo la yiraahdo Non Alingn ed Movement, ayaa ay dawlad da Soomaaliya ka mid ahayd aas-aaseyaashii urur kan kaasi oo inta badan loogga hadlo iskaashiga da wladaha ku bahoobay gaar ahaan dhinacyada nab ad-galyada, dhaqaalaha iyo jiritaanka dawla daha.
Wasiirka Ganacsiga iyo Warshadaha Soomaa liya Mudane Khaliif Cabdi Cumar, ayaa shirkan oo socday muddo laba cisho ah, waxa uu halkaas ka jeediyey khudbad dheer oo uu kaga hadlaayey muhiimada iskaashiga dawladaha ku bahoobay Ururkan, gaar ahaan dhinacyada dhaqaalaha iyo ganacsiga.Waxa kale oo uu carabka ku dhuftay in Soomaaliya ay ayidsan tahay mabaadiida ururkan isla-mar-ahaantaana ay mar walba danaynayso inay nabad kula noolaato caalamka intiisa kale isaga oo wufuuda shirkan ka soo qeyb-galay u sheegay in waayo-aragnimada ay ka soo dhaxleen burburkii iyo dagaaladdii sokeeye ba ay tahay in wixii khilaafaad ah lagu dhammeeyo wada-hadal iyo hab nabdoon kuwaas oo ka mid ah mabaadiida uu ku dhisan yahay ururkani.
Dawladaha Soomaaliya iyo Serbia, ayaa wada leh xariir dheer oo soo jireen ah oo soo bilaabmay horraantii 1950-kii, waxaana xiriidhkan cusub uu dib u furayaa siddii loo soo celin lahaa iskaashigii ka dhaxayn jiray labada dhinac gaar ahaan dhinacyada
Ganacsiga, Dhaqaalaha iyo Maal-gashiga.
Madaxweynaha Maamulka Hirshabeelle Cali C abdullaahi Xuseen Guudlaawe oo Shalay soo gaar ay M/Muqdisho ayaa ka hadlay doorashada soo so cota ee Xildhibaanada Golaha Shac abka ee ka dhaceysa Hirshabe elle.
Madaxweyne Cali Guudlaawe oo la hadlaayay warbaahinta ayaa waxaa uu sheegay in doorashada Xildhibaa nada Golaha Shacabka ay si cadaa lad ah ku dhici doonto, isla marka ana ay ka shaqeynayaan sidii u qabsoomi laheyd doorashada.
Madaxweynaha Hirshabeelle ayaa ballan qaad ay in doorashada Golaha Shacabka ay noqon doon to mid daahfuran oo si Cadaalad ku dhacda, wux uuna tilmaamay in waajib saaran uu yahay in loo Ca daalad falo qofka ku tartamaya doorashada.
"Dadka waxa deeqa Cadaalad aa ka jirto, ma ahee gacantaada waxa aad kasiiso lama kala gaar tid, laakin wax la deeqsiin karo waxaa ka jirta Cada alad waana mas’uuliyad na saaran, waxaana ballan qaadeynaa in doorashada si Cadaalad ah ku dhacdo” ayuu yiri Guudlaawe oo sheegay in si nab ad ah ugu soo dhammaatay doorashadii Senator ada Aqalka Sare.
Hadalkaan ayaa waxaa uu Madaxweyne Cali C/hi Xuseen Guudlaawe uu ka sheegay Munaasab ad lagu soo dhaweeyay oo Shalay ka dhacday Gar oonka diyaaradaha Aadan Cadde, kadib markii uu soo gaaray Magaalada Muqdisho.
Xaakimka Soomaaliga ah ee Maxkamadda ICJ oo ka hor-yimid go’aankii Dorraad
Xaakimka Soomaaliga ah ee ku jira Maxkamad da Caalamiga ah ee Cadaaladda Cabdulqawi Ax med Yuusuf ayaa ka horyimid go’aanka ay Maxk amadda uga reebtay Soomaaliya qeyb ka mid ah dhul-badeedkii ay laheyd oo la raaciyey dhanka Kenya.
Maxkamadda ayaa xukunka u riday sidii ay Soomaaliya dooneysay oo ah in xuduuddu noqotay xariiq toos ah, hase yeeshee waxay sameysay qalooc yar oo Soom aaliya ka reebay dhul-badeed dhan 12 mile.
Garsoore Cabdulqawi ayaa diiday sida ay ujeexday xarriiqa cusub iyo "sigib-tirka” ay samaysay maxka maddu iyo weliba sida ay u jeexday xarriiqa kala qa ybaha qaybta EEZ iyo qalfoof-qaaradeedka labada ba. Xaakim Cabdulqawi waxa uu ku tilmaamay tal laabadaas maxkamaddu qaadday ka leexday nid aamii sharciga, islamarkaana dib u qaabayn garsoor ku samaysay juquraafiga. Waxaa qoraalka Cabdulq awi Axmed Yusuf ka muuqday inuu aad uga soo hor jeeday go’aamadaa soo ay u codeeyeen inta badan garsoorayaasha maxkamadda.
Waxa uu sheegay in sida ay Maxkamaddu wax u xukmisay ay ka duwan tahay xukunadii hore ee ku wan la mid ahaa sida Qatar vs Bahrain iyo Eritrea vs Yemen, uuna xukunka yahay mid ka leexday dhaqa nkii Maxkamadda, ayada oo aan la bixin sabab lagu qanci karo oo lagu saleeyey xulashada xariiqda cusub.
Cabdulqawi ayaa sheegay in Maxkamadda ICJ ay xukunka gaartay ayada oo ku xisaabtameysa xu duudda badeedka Kenya iyo Tanzania, oo Kenya ay dhul-badeed badan ku weysay heshiis ay la gashay Tanzania.Waxa uu uu sheegay in go’aankan la gaaray sab abo la xiriira in Kenya ay "weyn laheyd dhul-badeed badan oo labada dhinac ay ka kala qaataan Soom aaliya iyo Tanzania,” sidaas darteed ay Maxkamad da dib u qaabeyn ku sameysay xariiqdii tooska ah eyd ee ay go’aa
misay."Xariiq badeedka Tanzania wax shaqo ah kuma lahan xadeynta xuduud badeedka Soomaaliya iyo Kenya,” ayuu ku dooday.
4 nin oo Soomaali walaalo ah oo dhacdo naxdin leh ku geeriyooday mar qura
Afar Nin oo walaalo Soomaali ah ayaa lagu soo waramayaa in ay isku mar ku geeriyoodeen ceel biyood ay ku dhaceen, kaasi oo ku yaalla tuulada Hora-hawd oo u dhow magaalada Jigjiga ee xar untada dowlad deegaanka Soomaalida.
Ceelka oo ku yaala Togga-Faafan ee tuulada Hora-hawd ayaa waxa hore u qoday Afarta Nin si ay biyo uga cabaan, hase ye eshe waxa uu u gu dambeyntiina sabab saday naft oodii, xilli ay doonayeen inay waraabiyaan beer ku taala togaas.
Sida ay sheegen ehellada Afarta Nin waxaa meydkooda ceelka laga soo saaray lix saac kadib markii ay ku dhaceen, markii uu ku war geliyay mid kamid ah shaqaalaha beerta ka shaqeynayey.
Waxaa lagu aasay meydadka Afarta Nin isla tuu lada Hora-hawd, waxayna dhacdadaan noqotay mid ay si weyn uga naxeen dadka deegaanka, maada ma oo raggaas si weyn looga yaqaanay deegaan kaas.
Dadka kasoo jeeda k/Galbeed ee ku sugan Ceerigaabo oo Somaliland ka codsaday in si nabad ah loo tarxiilo
Dadka ku dhaqan magaalada Ceerigaabo ee ka soo jeeda gobolada koonfur galbeed ee Soomaaliya ayaa bilaabay in ay albaabada u laaban goobahoo da ganacsiga, iyagoo isku diy aarinaya amar lagusoo rogay oo ah in ka baxaan Somal iland.
Dadka xarumaha ganacsi ku lahaa Ceerigaabo, ayaa So maliland ugu baaqay in aan lo ola dhaqmin sidii loola dhaq may dadkii laga barak aciyay magaalada Laascaano od labo todobaad ka hor.
Waxay codsadeen in si nabad galyo ah loo sama ta bixiyo isla- markaana loo turo dadka jilcisan ee aan awooddin safarka dheer ee ay kaga tagayaan Ceerigaabo, kuna tagayaan deegaannadooda.
Ganacsatadu waxay ka codsadeen guddiga mad axweynaha koonfur galbeed u magacaabay la soco shada dadka lagasoo barakacinayo Somaliland in ay si dhow ula socdaan qoysaska maatada ah.
Somaliland ayaa 24 ka bishaan u qabatay in ay Ceerigaabo uga baxaan dadka kasoo horjeeda ko onfur galbeed, waxayna sheegeen ciddii waqtigaas uga bixi weyda in tallaabo sharci ah laga qaadayo.
Ingiriiska oo kamid noqonaya saamileyda Deked da Magaalada Berbera
Shirkadda weyn ee dekedaha Dubai ee DP Wo rld iyo wakaaladda dowladda Brtitain u qaabil san horumarinta maaliyadda ee CDC Group ayaa Tal aadadii sheegay inay qorsheyn ayaan inay si wada jir ah kaabayaasha saadka ee qaqaradda Africa ugu maal-galiyaan illaa $1.72 bilyan dhowrka sano ee soo socda.
Maal-gashigaan ayay ku sheegeen inay ugu horreyso casriyeynta saddex dekedood, iyada oo marka hore diira dda lagu saari doonaa ballaarinta de kadaha ay maamusho DP World ee kala ah Ain So khna ee dalka Masar, dekada Dakar ee dalka Sen egal iyo dekdada Berbera ee Somaliland, sida ay sheegtay CDC. DP Word oo ay dawladdu leedahay ayay ka go’ antahay inay maal-geliso $1 bilyan sannadaha soo socda, halka CDC ay ballan-qaadday $320 milyan oo ay suuragal tahay inay ku darto illaa $ 400 mily an oo maal-galin kale ah. Maal-gashiga wadajirka ah ayaa aakhirka lagu ballaarin doonaa dalalka kale ee Afrika, taas oo ay rajaynayaan DP World iyo CDC inay dardargelin doonto ganacsiga gudaha iyo dibedda ee qaaradda.
"Waxaan leenahay aragti isku mid ah inaga iyo DP World, taas oo ah inaan doonayno inaan maal-gashi ku sameyno dekado badan oo qaaradda oo dhan ah intii suurtagal ah,” ayuu Madaxa CDC Tenbite Erm ias u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters.
Iskaashiga labadan shirkadood ayaa sidoo kale qor shayna inay maal-galiyaan, kaabayaasha dhaqaal aha, sida kaydka konteenarada iyo saldhigyada xar umaha ganacsiga.
CDC ayaa yeelan doonta saamiga wax ka yar kalabar saddexdan dekedood, sida uu sheegay Ermias, iyada oo DP World ay ku wareejinayso sa amiyada dekadahaas.
Ballaarinta saddexdan dekedood ayaa sida ay sheegtay CDC, waxay hagaajin doontaa helitaanka badeecadaha muhiimka u ah 35 milyan oo qof, oo ay ku jiraan waddamada deriska ah, iyagoo sidoo ka le abuuri doona 5 milyan oo shaqo, isla markaagana ay $51 bilyan ku dari doonaan ganacsiga guud mar ka la gaaro sanadka 2035.
Madaxweynaha Maraykanka Biden oo Aqalka Cad kula kulmaya Uhuru Kenyatta, maxay ka wada hadlayaan?
Madaxweyne Joe Biden ayaa ku martigelin doo na Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta kulan ka dhici doona Washington berri oo Khamiis ah.Kulank an ayaa ku soo beegmaya xilli Mareykanka uu qiim eynayo cuanqabateyn uu saaro dhinacyada colaadu u dhaxeyso ee dalalka dariska la ah Kenya ee Bar iga Africa.
Kulanka Aqalka Cad ayaa noqonaya kii ugu hore eyey ee uu Biden la qaato hogaamiye African ah.
Afhayeenka Aqalka Cad Jen Psaki ayaa qoraal ay soo saartey ku sheegtey in labada hogaamiye ay ka wadahadli doonaan dadaallada lagu difaacayo dem oqraadiyada, xuquuqda aadanaha, laguna hiigsan ayo nabadda iyo xasilloonida iyadoo sidoo kalena sare loo qaadayo kobcinta dhaqaalaha si loola tacaalo isbedelka cimilada.
Kenya ayaa hadda heysa kursiga ware egtada ah ee golaha ammaan ka QM bishan. Mareykanka iyo Ken ya ayaa leh wadashaqeyn dhinaca dhaqaalaha iyo ammaanka oo ay soo raacdo la dagaalanka argagixisada.
Maamulak Biden ayaa eegaya talaabo lagu ciqa ab oo lagaga jawaabo xasarada sii xumaan eysa ee Waqooyiga Ethiopia, halkaasi oo kumanaan kun oo qof lagu diley malaayiina ay ku barakeceen, kuwaas oo hadda u baahan gargaar bani’aadaminimo.
Nin la sheegay in uu dilay carruur badan ayaa ka baxsaday xabsi ku yaalla magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Booliska Kenya ayaa Masten Millimo Wanjala u taxaabay xabsiga bishii July ee sanadkan kadib markii uu qirtay inuu falal iskugu jira kufsi iyo dil uu kula kacay ugu yaraan 10 carruur ah.
Lama ogo sababta ka dambeysa baxsashada ninka oo ku xirnaa xabsi ku yaalla saldhigga booliska Joo go Road ee Nairobi, sida ay baahisay qaar kamid ah warbaahinta Kenya.
Waaxda dambi baarista Kenya ayaa bishii July baahiyay sawirka ninka oo ay sheegeen, "Dad-cu nkan wuxuu waday dil joogto ah oo uu ku bartilma meedsanayay carruurta ay da’dooda u dhexeyso 12 iyo13 sano. Wuxuu masuul ka ahaa afduubyada magaalada ruxay dhowaanahan”.
Waxay booliska sheegeen in uu khiyaani jiray car ruurta inta uu la ciyaarayo
Gaari nooca xamuulka oo walxaha qarxa laga soo buuxiyay ayaa galabnimo Sabti ahi waxa uu si lama fillaan ahayd ugu qarxay Isgoyska Zoobe, xilli mashquul badani uu ka jiray, laamaha am niga ayaana sheegay inay ku daba jooggeen gaarigaasi.
Dad tiradooda lagu qiyaasay boqolaallo oo qof ayaa ku dhintay qaraxaasi, oo illaa iyo hadda aanay jirin cid masuuliyadiisa sheegatay, inkas too si dhow loola xiriiriyay maleeshiyada Al Shabaab.
Marka laga soo taggo boqolaalka qof ee qarax aasi ku dhintay, waxaa kaloo jira gaadiid iyo dhis mooyin ganacsi oo ku burburay, iyadoo dad hanti ileyaal ahaa ay maanta qaarkood ka fara-maran yihiin.
Gudoomiyaha Ururka Haweenka Qaranka, Ba tuulo Sheekh Axmed Gaballe ayaa maalintii xi gtay qaraxaasi waxay bannaanbax ka socday Ma gaalada Muqdisho kaga hadaaqday dhawaaq aan horey looga maqal dhulka Soomaalida.
"Si gar iyo mag la’aan ah naloogu qarxiyay ba abuur laga soo buuxiyay walxaha qarxa ma dhihi karo, nukliyeer baa baabuur lagu soo shubay, waa nala dhex dhigay, waa nalagu gubay. Waxa nagu gubayna waa carruutii aan dhalnay oo aan korinay, oo aan kabinay. Waxaan nahay hooyo oyin gablan ah, oo bannaanka iyo gudaha ku gablan ah.” Ayay tiri Batuulo Sheekh Axmed.
Waxa kaloo ay tiri "Qof Soomaali ah oo hilibk iisoo gubtay bac lagu shubo oo dhulka hoostiisa la geliyo, waa taariikh ooyin leh, waa taariikh ma dow, waa wax maanta Soomaali keeni kara ama inaan jirnoo dagaalano ama in nala laayo oo aan saa u hoggano, oo aan waxba qabsan kari weyno oo adduunyada nalaga dabar-tiro.”
Inta qarax ay dunida ka gaysteen kooxaha hu beysan waxa uu qaraxani noqonaya kiisii ugu waxyeelada badnaa ee laga gaysto goob ay bar imageedada ku badan tahay.
Dadka wax fallanqeeya waxay sheegeen ina anay Villa Somalia ka faa’iideysan midnimadii iyo wadajirkii ay xilligaa dadka Soomaaliyeed muuji yeen, haddii ay garteen inaanay mintidiintu cidina dhaafeen.
Hoggaamiyeyaasha Dalalka G20 oo ku dhawa aqay gargaar gaarsiinta Dadka Reer Afgaanis taan.
Hoggaamiyeyaasha dalalka ugu dhaqaalaha weyn ee G20 ayaa mar kale xaqiijiyey "ka go’n aanshahooda wadajirka ah” si loo hubiyo sii so coshada gargaarka bani’aadamnimada ee dadka Afgaanistaan, sida lagaga dhawaaqay Aqalka Cad ee looga arrimiyo dalka maraykanka.Waxay ku heshiiyeen in gargaarku ku qulqulo dadka reer Afgaanista an ​​"iyagoo u sii maraya ururo caalami ah oo madaxbanna an” si "kor loogu qaado xuq uuqda aasaasiga ah ee dhammaan dadka reer Afgaanistaan, oo ay ku jiraan haweenka, gabdhaha, iyo xu bnaha koox aha laga tirada ba dan yahay,” ayaa lagu yiri ba yaan ka soo baxay Aqalka Cad ka dib shir ma daxeedka G20. "Mareykanka waxaa ka go’an in uu si dhow ula shaqeeyo beesha caalamka uuna u adeegsado hab diblumaasiyadeed, bani’aadani mo, iyo dhaqaale si wax looga qabto xaaladda Af gaanistaan ​​loona taageero dadka Afgaanistaan,” ayaa lagu yiri warbixinta.
Ku dhawaaqista ayaa imaanaysa iyadoo Afg hanistan ay wajahayso dhibaato dhaqaale oo sa ameysay kala bar dadka dalkaas, ama qiyaastii 18 milyan oo qof. Dalka Afgaanistaan ayaa ah dal ay si xoog leh u kabaysay kaalmo caalami ahi labaatankii sano ee la soo dhaafay
Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobey Gu terres ayaa sheegay in 80% dhaqaalaha Afgaani staan ​​uu yahay mid aan rasmi ahayn iyadoo haw eenku ay ciyaarayaan "door muhiim ah.” Taaliba an, ayaa ku guuldareysatay inay fuliso ballanqaa dyadoodii ahaa inay ilaalinayaan xuquuqda haw eenka, ayuu yiri madaxa QM isagoo ka codsaday taliyayaasha Afghanistan inay gutaan waajibaad ka ka saaran xuquuqda aadanaha iyo sharciga caalamiga ah.
Tarjubaan gacan ka geystay badbaadinta ma daxweynaha Mareykanka Joe Biden xilli uu duu faan baraf ku qabsaday Afghanistan 2008, ayaa isaga iyo qoyskiisa waxay ka baxsadeen Afghani stan, kadib markii ay toddobaadyo ka dhuumana yeen Taalibaan, waxaa sidaas xaqiijisay Waaxda Arrimaha Dibadda Mareykanka.
Kadib markii isaga iyo qoyskiisa ay dhinaca dhulka ka galeen Pakistan, Aman Khalili iyo qoys kiisa ayaa waxaa magaalada Doha ee dalka Qa tar loogu duuliyey diyaarad ay leedahay dowlad da Mareykanka, sida uu afhayeen u hadlay Waa xda Arrimaha Dibadda u sheegay AFP.
Wargeyska Wall Street Journal ayaa goor sii horeysay sheegay in Aman, xaaskiiska iyo car uurtiisa, ay caawinaad ka heleen askar hore oo Mareykan ah iyo dad Afghan-Mareykan ah.
Sanadii 2008, Khalili ayaa ahaa tarjumaan u shaqeynayey ciimada Mareykanka, markii Biden oo xilligaas ahaa Senator, islamarkaana ay wehl iyeen laba senator oo kale Chuck Hagel iyo John Kerry, ay booqdeen Afghanistan.
Markii duufaan baraf uu ku qasbay diyaarad helicopter oo ay la socdeen inay cago dhigato meel baadiye ah, Khalili ayaa ku biiray ciidan mil itari ah oo ka tegay saldhigga Bagram, oo ugu tegay buuraha si ay u badbaadiyaan.
Saddex iyo toban sano kadib, Khalili ayaa aw oodi waayey in codsigiisa ahaa inuu u haajiro Ma reykanka la ansixiyo kahor inta aanay Taalibaan dib u qabsan dalkaas. "Hello, Mudane Madax weyne: Badbaadi aniga iyo qoyskeyga,” ayaa la ga soo xigtay Khalili oo la hadlay wargeyska Wall Street Journal dhammaadkii August, markii lasoo geba-gebeeyey daad-gureynta 120,000 oo qof oo laga soo qaaday Afghanistan.
Ayada oo ka jawaabeysa, ayaa afhayeenka Aqalak Cad Jen Psaki waxay sheegtay in dow ladda ay caawin doonto.
"Waan kasoo saari doonnaa. Waan sharfi doon naa adeegaagga,” ayey tiri.AFP
Gabar Laba jeer ku guuleysatey Ciyaaraha fud ud oo la helay Meydkeeda
Agnes Tirop, oo heysata rikoorka adduunka, taasoo u dhalatey Kenya, ayaa laga helay mey dkeeda gurigeeda, kaasoo ku yaalla magaalo dhacda galbeedka Kenya, oo la yiraahdo Iten, iyadoo booliiska ninkii ay u dhaxdey u yahay qo fka koowaad ee loogga shakisan yahay dilkeeda.
Laba jeer oo ay kugu uleysatey biladda Naxa asta ee Ciyaaraha fudud ee dunida, iyadoo kaalin ta afraad ka gashey ciy aarihii kama danbeysta ee Olympic-kada, oo la or dayey masaafo dhan 5,000m, kuwaasoo dhama adey laba bilood ka hor. Waxey dhawaan noq otey 25 sano jir.
Baaritaan danbi ayaa haatan lagu bilaabey dhi mashada gabadhan, iyadoo booliisku ay sheege en in ninkeedii la waayey.
Arbacaddii oo Shalay ah, baarayaasha dambig ani ayaa waxey tageen guriga Tirop, taasoo bo oliisku ay sheegeen in aabaheed waa gabadha dhimataye, lagu soo war galiyey in isna la waay ey habeenimadii talaadada.
Tom Makori, oo ah madaxa booliiska ee aga gaarka ay dhibaatadu ka dhacdey, ayaa sheegay markii booliisku ay gaareen guriga, waxey ka heleen meydka Tirop oo saaran sariirta, waxaana jirey dhiig badan oo daad sanaa dhulka.
Mareykanka oo ka dalbaday Pyongyang in ay ka fogaato ficil keeni kara Xiisad
Dowladda Mareykan ayaa ugu baaqday Ku uriyada Waqooyi inay ka waantowdo ficillada sii kordhaya ee meesha ka saari karo wadahadala da iyo iskaashiga u dhexeeya labada Kuuriya iyo Mareykanka.
Lataliyaha Amniga Qaranka ee Aqalka Cad Jake Sullivan, bayaan uu soo saaray kadib kulan uu kula qaatay Washingt on dhiggiisa Kuuriyada Koonfureed Suh Hoon ayuu sheegay in ay wanagsantahay in Pyongy ang ay joojiso waxyaabaha sababi karo carqalad eeynta iskaashi ee ay la leedahay Caalamka intii sa kale.
Hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa sheegay in horumarinta hubka ay lama huraan u tahay si looga hortago siyaasadaha cad aawadda leh ee Maraykanka iyo Kuuriyada Koo nfureed.
Khudbad uu ka jeediyay Hoggaamiyaha Kuur iyada Waqooyi, bandhiggii horumarinta difaacaPyongyang ayaa kordhineysay xiisadda soo cusb onaatay ee keentay in Washington ay ka falce liso. Sawirro ay baahisay warbaahinta, ayaa mu ujinaya Kim Jong Un oo ag taagnaa hub kala duwan, oo ay ku jiraan Gantaalaha qaaradaha isaga goosha, sida Hwasong-16
Waxaa degaano hoostaga degmada Guriceel ee Gobolka Galgaduud ka socda dhaq dhaqaa qyo Ciidan oo ay wadaan Ciidamada dowladda iyo kuwa Galmudug, kuwaas oo ku wajahan de gmada Guriceel.
Todobaadkii 2aad ayaa waxaa degmada Gu riceel ku sugan Ciidamada Ahlusunna Walj amaaca, kuwaas oo difaacyo adag ka sameystay gudaha iyo daafaha maagalada si ay isaga dif aacaan hadii uu weerar kaga yimaado dhinaca Dowladda Soomaaliya & Galmudug.
Xaalada degmada Guriceel ee Gobolka Galg aduud ayaan caga badan ku taagneyn, waxaana dhowr jeer digniin laga muujiyay in Ciidamada do wladda iho kuwa Galmudug inay weeraraan deg madaas oo ay gacanta ku hayaan Ciidamada Ahlusunna.
Waxaa Dorraad magaalada Hague ee dalka Holland go’aankii ugu dambeeyay looga gaaray kiiska badda ee u dhexeeyay Soomaaliya iyo kenya.
Is-afgaradkaas wuxuu dhigayay in labada dal aysan iska hor istaagin inay gudbitaan cabbirka, xogta iyo qariiradaha la xiriira Qalfoof badeedka labada dal, oo loo gudbinayay Guddi Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha Qalfoof badeedka dalalka Caalamka. Isfahamkaas waxaa dhinaca Soomaaliya u saxiixay Cabdiraxman Cabdishakur, oo xilligaasi ahaa wasiirkii qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah.
"Hadallo is khilaafsan ayay hore ugu sheegtay Maxkamadan. Dib u cusboonaysiinteeda, Kenya waxay ku doodeysaa in dhinacyada ay xaddideen soohdintooda iyagoo raalli ka ah muddo dheer ka hor, inta aysan Soomaaliya dacwadeeda gudbin ka hor.” Ayuu yiri qareenka.
Bishii December 2017 ayey Kenya xareysay jawaabteedii ay ka bixineysay kiiska ay Soomaaliya u gudbisay maxkamadda caalamiga ah ee ICJ. Xeerilaaliyaha Guud ee Kenya wuxuu ku dooday in maxkamadda aysan xaq u lahayn in ay go’aan ka gaarto kiiskan. Wuxuu codsaday in arrintan ay labada dal ku xalliyaan wadahadal.
Qareenka ayaa ku doodaya in hadalladii Kenya ay sheegtay intii ay socdeen wadahadaladii laba geesoodka ahaa ee ay la galeen Soomaaliya, sanadihii 2013 iyo 2014, aysan noqon kuwa caawiyay
"Xaqiiqda dhabta ah ee gorgortanku dhacay, iyo maqnaanshaha tixraac ku saabsan soohdinta lagu aasaasay raalli ahaanshaha intii lagu jiray wadaxaajoodyadaas, waa mid muhiim ah.” Ayuu yiri Qareenka.
"Faahfaahinta wadaxaajoodka Kenya iyo Soomaaliya waxay caddeynaysaa in labada dhinac midkoodna aaminsan yahay in ay jirto xuduudo la dejiyay oo aan ku saleysnayn raalli ahaansho iyo inaan loo marin dariiq kale.
Bishii May 2013-kii, dowladaha Kenya iyo Soomaaliya ayaa soo saaray bayaan wadajir ah. Waxay ku micneeyeen in "labada Wasiir ay hoosta ka xarriiqeen baahida loo qabo in lagu shaqeeyo qaab-dhismeedka habsami u socodka howlaha badda kala xadidaya.”Hadalkaas wadajirka ah "wuxuu si cad ula jaan qaadi karaa waxa ay rumeysan tahay Kenya ee cusub ee ah soohdinta badda ayaa horeyba u jirtay wakhti dheer, tan iyo markii si buuxda loo xadiday. Intii lagu gudajiray muddadii udhaxeysay Febraayo iyo Ogosto 2014-kii, waxay kulmeen laba jeer.
Qareenka ayaa sidoo kale ku doodaya in sharciga Kenya uu qorayo xuduudda baddeeda ee 1989-kii, oo la sharciyeey kaas oo illaa iyo hadda shaqeeya. Waana sharciga loo gudbiyay hay’ad Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimahabadaha
Uhuru oo jawaab ka bixiyey go'aankii ay Maxka madda ICJ ka gaartay kiiska badda
Isaga oo ka hadlaya go’aanka, ayaa Kenyatta wuxuu sheegay in natiijada ay aheyd mid "labada dhinac uu mid la laabtay waxba,” wuxuuna sheegay in Kenya aysan aqbaleyn oo aysan aqoonsaeyn.
Kenyatta ayaa yiri "ma damacsani inaan ka tago dhaarteeda qaranka; waxaana sameyn doonaa wax kasta oo aan awoodo, ka taliyaha Ciidamada Qaranka ahaan, si aan u ilaaliyo dhulka Jamhuuriyaddan weyn.”
Waxa uu ku dooday in go’aanka uu tusaale u yahay "sii socoshada ka ka tallaabsashada sharci ee ICJ, uuna abuuray su’aal aas-aasi ah oo ku saabsan xushmadda ay dalalka madax-banaan u hayaan hanaanka cadaaladda caalamiga ah.”
"Xaqiiqdii, Kenya waxay shaki ka qabtaa in dal uu kasoo dhex muuqan doono kiis sidan oo kale ah,” ayuu yiri. "Maxkamadaha caalamiga ah waxay sharciyadooda la egtahay inta dal uu u ogol yahay,” ayuu yiri isaga oo ku sugan New York, halkaasi oo uu ku guddoomiyey shirka Golaha Ammaanka.
"Sidaas darteed, Kenya waxay ugu baaqaysaa bulshada caalamka inay abuuraan deegaan awooda raadinta heshiis laga wada-xaajooday. Go’aankan w